EZimbabwe: $ 3,5 bhiliyoni abakhokhelwe abalimi abamhlophe njengenxephezelo yomhlaba - teles
By Tchinde On UJul 31, 2020
IDurban izokhipha izibopho zesikhathi eside bese ihlangene ngokunikela kubanikeli bamazwe kanye nabalimi ukuqoqa imali.
IZambia ngoLwesithathu ivume ukukhokha u- $ 3,5 billion wesinxephezelo kubalimi abamhlophe umhlaba wabo osuswe ezweni nguhulumeni ukuthi uhlehlise imindeni yabamnyama, okuyinyathelo elilodwa elisondele ekuxazululeni enye yenqubomgomo ebaluleke kakhulu emhlabeni. izingxabano zesikhathi sikaRobert Mugabe.
Kepha izwe laseNingizimu ne-Afrika alinayo imali futhi lizokhipha izibopho zesikhathi eside bese lihlangene lihlanganyele nabanikeli bamazwe aphesheya nabalimi ukuthola imali, ngokwesivumelwano sesinxephezelo.
Eminyakeni engamashumi amabili edlule, uhulumeni kaMugabe ngesinye isikhathi wayekhipha udlame lwabalimi abamhlophe abangama-4 500 waphinde wabiwa umhlaba emindenini emnyama engaba ngu-300, 000, wathi ulungisa ukungalingani komhlaba wamakholoni.
Isivumelwano esisayinwe emahofisini kaMongameli Emmerson Mnangagwa's State House enhlokodolobha eHarare sikhombisa ukuthi abalimi abamhlophe bazonxeshezelwa ngengqalasizinda yamapulazi hhayi umhlaba uqobo, ngokusho komthethosisekelo kazwelonke.
UMnangagwa uthe isivumelwano sangoLwesithathu "singumlando ngezindlela eziningi."
"Lokhu kuletha ukuvalwa kanye nesiqalo esisha emlandweni wezinkulumo zomhlaba eZimbabwe," kusho uMnangagwa.
“Le nqubo esilethe kulo mcimbi isemlando njengoba nje ingukuqina kokungaguquki komhlaba kanye nokuwuphawu lokuzibophezela kwethu kwezomthethosisekelo, ukuhlonipha umthetho kanye namalungelo. wezempahla, ”kusho yena.
UNgqongqoshe wezeziMali uMthuli Ncube uthe emcimbini wokusayina: “Ngokuvumelana nalokho, sizinikele izinyanga eziyi-12 zokuhamba emhlabeni wonke, nxazonke eZimbabwe, ukucabanga ngezindlela zokuthola imali. Sizimisele ukukwenza kwenzeke. Futhi mayelana nokuzibophezela, hhayi mayelana nokubeka imali etafuleni. Kuyindaba yokuzibophezela. "
Imininingwane yokuthi umfuyi ngamunye noma inzalo yakhe yimalini, enikezwe isikhathi selokhu kwembulwa kwamapulazi, kungenzeka ukuthi ibitholile ibingakacaci, kepha uhulumeni uthe izobeka phambili abantu abadala lapho wokwakhiwa kwezindawo zokuhlala.
Ugwayi eZimbabwe: Umkhiqizi omkhulu kakhulu wokushintshaniswa kwamanye amazwe okuthinteka yi-COVID-19 (2:00)
Abalimi babezothola amaphesenti angama-50 esinxephezelo ngemuva konyaka owodwa kanti abanye bangakapheli iminyaka emihlanu.
UNcube kanye noNgqongqoshe Wezokulima, u-Oppah Muchinguri-Kashiri, basayine egameni likahulumeni, ngenkathi izinyunyana zabalimi kanye ne-Consortium yakwamanye amazwe eye yenza ukuhlolwa kwaqhubeka nokwakha isivumelwano.
"Njengabantu baseZimbabwe sikhethe ukuxazulula le nkinga ekhona," kusho u-Andrew Pascoe, umholi weCommerce Farmers Union emele abalimi abamhlophe.
Ukuthathwa komhlaba kungenye yezinqubomgomo zikaMugabe zokusayinda ezonakalisa ubuhlobo kanye neNtshonalanga. UMugabe, nowasuswa ekuqothulweni kuka-2017 washona nyakenye, wasola abaseNtshonalanga ngokubeka unswinyo kuhulumeni wakhe njengesijeziso.
Lolu hlelo selusahlukanisa imibono yabantu ezweni laseZimbabwe, njengoba abaphikisi belibona njengenqubo yobumbano eye yashiya izwe lilwele ukuzondla. Kepha abalandeli bakhe bathi unikeze amandla abamnyama abangenamhlaba.
UMnangagwa uthe ukubuyiswa komhlaba ngeke kubuyelwe emuva, kepha ukukhokhwa kwesinxephezelo kubalulekile ukuze kubuyiswe ubudlelwano nabaseNtshonalanga.
Izwe laseZimbabwe laqala impikiswano yokubuyiselwa komhlaba ngomhlaba ngonyaka ka 2000 lapho izishoshovu zenhlangano ebusayo ye Zanu-PF kanye nezikhulu zempi yenkululeko yeminyaka yo-1970 zathatha indawo enkulu yamapulazi.
UMugabe wakucacisa ukuthathwa komhlaba njengendlela yokulungisa okungalungile ngokomlando ngokufuna umhlaba owathathwa ngenkani kubantu abamnyama bezwe.
Abagxeki basola uhlelo lukaMugabe lokuthatha umhlaba ngodlame embonini yezolimo - okuyiyona nto ebaluleke kakhulu kwezomnotho. Ukukhishwa komnotho kwehle ngesigamu ngenxa yokuthathwa komhlaba kanti nomnotho ubuphazamisekile kusukela lapho.